S&P 500 ၏ခွေးများသည်ဘုတ်အဖွဲ့တစ်လျှောက်ရှိအဆင့်မြင့်ရွယ်တူချင်းများ - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
နိုဝင်ဘာလ 17, 2019 ဇူလိုင်လ 16, 2020 S & P 500 ၏ခွေးများ ဘ‌‌လော့ခ်, ငွေချေးစာချုပ်များ, စီးပွားရေး, Corporate Bonds, မြတ်များမင်းမျိုးအနွယ်ဝင်, အဆိုပါ Dow ၏ခွေးများ, အဆိုပါ Dow 2020 ၏ခွေး, S&P 500 ၏ခွေးများ - ၂၀၂၀, အသားပေးသတင်းများ, Fixed ဝင်ငွေခွန်, ဝင်ငွေ Aristocrats
၎င်း၏ S&P 500 Portfolio ၏ Dogs ၏စစ်ဆေးမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
ကွဲပြားခြားနားသောအပြာရောင် chip ခွဲဝေမှုအစုရှယ်ယာများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းသည်ယနေ့စျေးကွက်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုမည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ကိုလေ့လာထားသည်။
ယခုနှစ်တွင် Durig ၏ S & P 500 ၏ခွေးများ ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီးတစ်နှစ်မှယနေ့အထိ၎င်း၏အရင်းနှီးဆုံးရွယ်တူချင်းထက်သာလွန်ပြီးတစ်နှစ်နောက်တစ်နှစ်နှင့်နှစ်စဉ်တစ်သက်တာပြန်လာသည့်ကာလများထက်သာလွန်သည်။ Durig ဒီ attributes ထူးချွန်စွမ်းဆောင်ရည် သို့ ခြုံငုံစျေးကွက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သမိုင်းမတည်ငြိမ်မှုလျော့နည်းသွားသည်.
များစွာသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ယနေ့ခေတ်တွင်ရှယ်ယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်နေကြသော်လည်း Durig's S & P 500 အစုစု၏ခွေးများ တကယ်ပါရှိသည် ဝေးလျော့နည်းသမိုင်းမတည်ငြိမ်မှု တစ် ဦး နှင့်အတူ S & P 500 သူ့ဟာသူထက် beta ကို သာ၏ 0.73 (S & P 500 vs.) ။ အဂတိလိုက်စားမှုအားဖြင့်ဒီအပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုလျော့နည်းသွားခြင်းဟာ Durig ရဲ့အစုစုကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ခြင်းဖြင့်ဒီနေ့ရဲ့ရှယ်ယာစျေးကွက်ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးတဲ့ဖောက်သည်များငြိမ်းချမ်းစွာအိပ်စက်ခြင်းကိုကူညီခြင်းဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
အစုရှယ်ယာများ၏ S&P 500 နှင့်စျေးကွက်တစ်ခုလုံး၏နိမ့်ကျခြင်းနှင့် ပိုမို၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်စပ်မှုရှိခြင်းနှင့်အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်း၊ မြင့်မားသည့်အထွက်နှုန်းရှိသောအပြာရောင်ချစ်ပ်ကုမ္ပဏီများသည်မတည်ငြိမ်သောနှင့်အပြောင်းအလဲမြန်ဆန်သောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်၎င်းသည်သမိုင်းကြောင်းထက်သာလွန်မှုကိုခွင့်ပြုခဲ့ခြင်း၏အစိတ်အပိုင်း ရှယ်ယာစျေးကွက်၏။
သော့ကဒီကုမ္ပဏီတွေပဲ အပြာရောင်ချစ်ပ် အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်စျေးကွက်မငြိမ်မသက်ဖြစ်ခြင်းသို့မဟုတ်တည်ငြိမ်။ အမြတ်ငွေတိုးပွားလာခြင်း၊ အစုရှယ်ယာရှင်များအားအမြတ်များများပေးအပ်ခြင်းနှင့်မဟာဗျူဟာဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုခိုင်မာစွာလုပ်ဆောင်ခြင်းစသည်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ အတိုးနှုန်းများပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ထိရောက်သောဒဏ်ခံနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ယနေ့ဘဏ္investorာရေးစျေးကွက်များသည်ခေတ်မီဆန်းပြားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအတွက်တောင်သွားလာရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ အဖြစ် အမေရိကန်ဘဏ္Treာရေးအထွက်နှုန်းဆက်လက်ကျဆင်းနေသည်များစွာသောသူတို့သည်ဆွဲဆောင်မှုကောင်းသည့်အောင်မြင်မှုများရရန်အခြားနေရာများတွင်ရှာဖွေနေကြသည်။ Durig ရဲ့ S & P 500 ၏ခွေးများ ရှိပါတယ် ၎င်း၏အရင်းနှီးဆုံးရွယ်တူများထက်သာလွန်အောက်ပါအကျိုးခံစားခွင့်များကိုထုတ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည် -
S & P 500 ထက်သမိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုနည်း
US Blue Chip Equity Trends တွင်ပါ ၀ င်ပါ
ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အမြင့်ဆုံးအထွက်နှုန်းရှိသောအပြာရောင် chip ခွဲဝေမှုများကိုနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီများမှရယူပါ
Blue Chips သည် ၀ င်ငွေတည်ငြိမ်မှုကိုရရှိစေပြီး ၀ င်ငွေနှင့်ကျန်းမာရေးတိုးတက်မှုနှင့်ရှယ်ယာရှင်များအားပေးသောအမြတ်များ
ရန်ရှာကြံရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် အမျိုးမျိုးနှင့်ကြီးထွားသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေ ပိုမိုမြင့်မားသည့်အထွက်နှုန်းရှိသောအပြာရောင်ချစ်စက် Durig ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စီမံခန့်ခွဲ, S & P 500 အစုစု၏ခွေးများ အားလုံးနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာဖြေရှင်းချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကသို့မဟုတ်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များရလိုပါက Durig's S & P 500 အစုစု၏ခွေးများ, မခေါ်ကျေးဇူးပြုပြီး Durig Capital ကို at (971) 327-8847, ဒါမှမဟုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ info@durig.com.
တရုတ်နိုင်ငံသည်ကုန်ကြမ်းကုန်ကြမ်းတင်ပို့မှုကိုလွှမ်းမိုးနိုင် - အီးယူသည်အခြားရွေးချယ်စရာအရင်းအမြစ်တစ်ခုကိုရှာတွေ့နိုင်သလား။
Instagram အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုများကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်လိုက်နာရန် 2019 မဟာဗျူဟာများနှင့်လမ်းကြောင်းများ